Hedduu Nama Gadisiisa: Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture. – Kichuu
[ July 23, 2021 ] ከጋምቤላ ነጻነት ግንባር ( ጋነግ) የተሰጠ መግለጫ	Amharic
[ July 23, 2021 ] Abiy Ahmed and his council have made planting trees after he ended a meeting about the achievement of the budget year 2013.	Africa
[ July 22, 2021 ] Waraana Tigraay: Lola naannoo Affaariin namoonni kumaatamni qe’eerraa buqqa’an	News
[ July 22, 2021 ] A new video of the places that were fought today and pushed each other	Africa
[ July 22, 2021 ] Daring to Dream: Mental Health Support Lightens Emotional Load for Tigray’s Conflict-displaced Children	Health
[ July 22, 2021 ] Ethiopia: Demonstrations in Meskel square – Addis has seen a few	Africa
[ July 22, 2021 ] ‘Miidiyaan haleellaa gosa haaraa as dhufaa jiruuf qophaa’uu qaba’	Africa
[ July 22, 2021 ] Bilxiginnaan: Haala kanaan ogeessa Fayyaa keenya gara dirree waraanaatti erguuf deemaa	News
[ July 22, 2021 ] Ethiopia’s pro-government supporters protest against TPLF in Addis Ababa	TV
[ July 22, 2021 ] #Ofeeggannoo Ariifachiisaa! PPn muddama ishee mudate irraa kan ka’e	News
HomeAfaan OromooNewsHedduu Nama Gadisiisa: Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture.
Hedduu Nama Gadisiisa: Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture.
Bayyee nama gadisiisa Oromoon tan walirrati ojjetu, kuni gocha dinummati.
Hedduu Nama Gadisiisa : Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture.
Yeroon haala amaantana keesa jirtu gafaadhulee heddu takka imimaan ishee lolasaa natti qaaqte.shirri iseratti dalagames oromuma ofi nama jibisiisa.mulunis akasiti natti qaaqte. “…….. weelisa bekama Oromoo toko consarti aka dalaguuf Australia tti haala naa mijeseture. anis tole je’ee process egale, ji’a ja’a booda na milkaa’ee Australia gale. yeroo achi ga’u waanan hin yaane ta’e Visa naaf Rukutame ka torbee lama qofa. akasumas ummanis kan sin fide warra, SHANEE tti je’anii namuu Konsartticha irratti hin argamne. Ani Weelistu ummata Oromooti malee kan dhaaba siyaasa kamii miti. Anaan Ummata Oromootu Na yaame se’e malee garee fi Gooxii hin Seene. Akasumas ani Baqatumaaf biyaa hin baane dalageen debi’a jedheen male.oso hin jalatiin baqattuu ta’ee harka akkan kennadhuu fi essuma deddemee akkan hin hojjene hidhaa wayaanee caala na hidhan.kanaaf hedduu natti dhaga’ame. biyya kiyya,fi saba kiyya, akasuma mucaa kiyya yaadee yeroo hunda waanan boo’uuf lafti naan naa nana’e kufa. Fayya koo miti.. osoon deemee akuma artisiti Oromoo toko dalaguu danda’u cabaan ta’e… “jette heddu boosuu bilbilaan hasa’a dadhabde.kanuma.waan heduu nama gadisiisu, mulun bara master Pilaanii Finfinnee ada durumaan qabsoo Waraqasan qerroo waliin mormaa turte. Sirbota aadaa oromoo sadarkaa adda durumaa ummata Oromoo biratti beekmiti. Gatiin ishee akkas ta’uu hin qabu. gama keenyaan gargagarsa godhumuuf qabu gochaa jira.
Dr. Abdulaziz Teha Canada Toronto.
Siikkoo Fi Mandoo
Muluu Baqqalaa “Kottumee” **New Oromo Music** Video (2015)
Zerihun Negesa Kajela says:
Kaayyoo irraa gargar cittee ofitti hin xaxiin gaadii
Dhugaanis deebi’eeraa, naaf darba jedhii yaadi
Danboobaa Kiyyuu says:
Namichi Waa’ee Artist Mulu baqalaa barreesse kuni face book fi asi illeeirratti nama akkami?Mulu fi inni hiriyaa miti.Yeroo qoranne namni kuni talfuufa tahuu hubannee irra,ofii ili naa harkafitu.Waan dubbatuu fi barreessuus dhara kan ololaan guutameedha.
Maqaa Aristii kabajamoo kana qabatee erga biraa dabarsuu yaalauura ykns fakkoo yeroo sirba waa’ee barattoota mudatee sana asi irra kaa’ee akka amma tana rakkoo artistii kana mudateeruu fakkeessee nama walliin rukutuu yaala.
Kana male.artist Mulu,nama kabajaa guguddaa qabu,kashlabbee fi talfuufaaf hiriyaa miti.
Namn kuni maqaa artis qabatee oli gadi fiiguu irraa akka of qusatu ergaa dabarsinaaf.
ከጋምቤላ ነጻነት ግንባር ( ጋነግ) የተሰጠ መግለጫ
Ethiopia: Demonstrations in Meskel square – Addis has seen a few
#Ofeeggannoo Ariifachiisaa! PPn muddama ishee mudate irraa kan ka’e
ይህን ጦርነት የርስት ማስመለስ ጦርንርት ብለዉ የሚያስቡ ጂሎች ናቸዉ።
Sirni Dargii Duraanii Deebi’e!
Bilxiginnaa: Innikun hoo maal jechuudha laata? Ethiopia is Jeorge Floyd??
Ethiopia’s Problems Stem From Internal Colonialism!